အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးမိပြီ ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းသော ယောက်ျားများ – Amara News
ရည်းစားတစ်ထောင်၊ လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကြားဖူးပါတယ်။အမျိုးသမီးများ ရည်းစားတစ်ထောင်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသေးခင်မှာ အချစ်ကို ယုံပြီး ဘဝကို မပုံအပ်သင့်ပါဘူး။အချစ်ဦးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အလွန်လှပသလောက် တကယ်ညားသွားရင် သာယာတာက နည်းပါတယ်။
ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးကို အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အောက်ပါအကျင့်များငြိစွန်းနေတဲ့ ယောက်ျားများကိုတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးခဲ့ရင် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
၁။ ကပ်စေးနှဲလွန်းတဲ့ ယောက်ျား
အရပ်စကားနဲ့ နှပ်ချေးလို့လည်းခေါ်တာကြားဖူးပါတယ်။ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုစားရင် ပိုက်ဆံပေးဖို့ လက်တွန့်တတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်။ ဘယ်လို Brand တွေကို ဝတ်ဆင်တယ် စသည်ဖြင့် သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ်၊မသိမသာဖြစ်ဖြစ် ကြွားတတ်ပေမဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းရပြီဆိုရင် မသိသလို နေတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးယောက်ျား ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
၂။ သံသယ များတဲ့ယောက်ျား
တအားချစ်လို့ သံသယများတယ်။အရမ်းချစ်လို့ သဝန်တိုတယ် စသည်ဖြင့် ပြောနိုင်ပေမဲ့သံသယများတဲ့ ယောက်ျားများဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်မရှိတာ သေချာပါတယ်။ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ တစ်သက်လုံး နေထိုင်ဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး။ ကိုယ်ဘာပဲပြောပြော သူလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ဗါယ်ကို ကောက်ယူသွားတတ်တယ်။ပြီးရင် မထင်မှတ်တဲ့ အချိန်အခါမှာ စိတ်ဆိုးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီရင်တော့ သံသယကင်းပြီး စိတ်ချသွားတဲ့ ယောက်ျားတွေလည်း ရှိကြပြန်တယ်။
၃။ မျိုးချစ်လွန်းတဲ့ ယောက်ျား
သူ့အမျိုးဆိုရင် အကုန်ကောင်းတယ်။နည်းနည်းမှ ထိလို့မရဘူး၊ သူများမိသားစု၊ သူများအမျိုးဆိုရင် လူမထင်ဘူး။ဘာမဆို သူတို့ဆိုရင် အကောင်းချည်းပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ။
စိတ်များတဲ့ယောက်ျား၊ ရည်းစားကို အထည်လဲသလို ထားတဲ့ယောက်ျားမျိုးကို ရှောင်ပါ။ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ ညားသွားတာ ရည်းစားလုဘက်တွေကို အနိုင်ရလိုက်ပြီ မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ ကိုယ်နဲ့ ညားပြီးရင် နောင်အသစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
အစားအသောက်မက်တဲ့ ယောက်ျားထက် လောင်းကစားဝါသနာပါတဲ့ယောက်ျားက ပိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်သမျှ အကုန်ပြောင်သွားတတ်လို့ပါ။ လောင်းကစားဆိုရာမှာ ( ၂ ) လုံးထီ၊ ( ၃ )လုံးထီလည်းပါဝင်ပါတယ်။
လက်ပါတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ တစ်ခါခွင့်လွတ်လိုက်ရင် နောက်တစ်ခါ ပြန်လာတတ်ပါတယ်။
အတ္တဆန်လွန်းရင် ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ ဘာမဆို သူမှန်တယ်။ ဘာမဆို သူ့ကို အလိုလိုက်မှဆိုရင် တစ်သက်လုံး ဘယ်လို အဆင်ပြေနိုင်မလဲ။
၈။ ယောက်ျားကြီးဝါဒ လွန်ကဲခြင်း
ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာ အရည်အချင်းရှိတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်မူ အပြည့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ပြသနာက တစ်ချက်လွတ်အမိန့်ပြောသလို စကားပြောတတ်ပါတယ်။သူဟာ သင့်ကိုစိတ်တွင်းကနေ အထင်သေးနေတတ်ပါတယ်။မိန်းကလေးများအားလုံးကို အထင်သေးနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ အမြင်မှာ ဒီကမ္ဘာကြီးကို ယော့က်ျားများက ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ မိန်းမဆိုတာ အဖြည့်ခံ လို့ သဘောထားပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြား အိမျထောငျဘကျရှေးမိပွီ ဆိုရငျ ကွောကျစရာကောငျးသော ယောကျြားမြား
ရညျးစားတဈထောငျ၊ လငျကောငျတဈယောကျ ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကွားဖူးပါတယျ။အမြိုးသမီးမြား ရညျးစားတဈထောငျထားရမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အမြိုးသားတဈဦးရဲ့ အကွောငျးကို ကောငျးကောငျးမသိသေးခငျမှာ အခဈြကို ယုံပွီး ဘဝကို မပုံအပျသငျ့ပါဘူး။အခဈြဦးဆိုတာ ရုပျရှငျထဲမှာ ဇာတျလမျးထဲမှာ အလှနျလှပသလောကျ တကယျညားသှားရငျ သာယာတာက နညျးပါတယျ။
ဘယျလိုယောကျြားမြိုးကို အိမျထောငျဘကျအဖွဈရှေးခယျြသငျ့ပါသလဲဆိုတာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အကွိုကျခငျြးမတူကွပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အောကျပါအကငျြ့မြားငွိစှနျးနတေဲ့ ယောကျြားမြားကိုတော့ အိမျထောငျဘကျရှေးခဲ့ရငျ ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
၁။ ကပျစေးနှဲလှနျးတဲ့ ယောကျြား
အရပျစကားနဲ့ နှပျခြေးလို့လညျးချေါတာကွားဖူးပါတယျ။ဒီလိုယောကျြားမြိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုငျမှာ တဈခုခုစားရငျ ပိုကျဆံပေးဖို့ လကျတှနျ့တတျတာကို တှရေ့တတျပါတယျ။သူဟာဘယျလောကျခမျြးသာတယျ။ ဘယျလို Brand တှကေို ဝတျဆငျတယျ စသညျဖွငျ့ သိသိသာသာဖွဈဖွဈ၊မသိမသာဖွဈဖွဈ ကွှားတတျပမေဲ့ ပိုကျဆံရှငျးရပွီဆိုရငျ မသိသလို နတေတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးယောကျြား ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
၂။ သံသယ မြားတဲ့ယောကျြား
တအားခဈြလို့ သံသယမြားတယျ။အရမျးခဈြလို့ သဝနျတိုတယျ စသညျဖွငျ့ ပွောနိုငျပမေဲ့သံသယမြားတဲ့ ယောကျြားမြားဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျခကျြမရှိတာ သခြောပါတယျ။ဒီလိုယောကျြားမြိုးနဲ့ တဈသကျလုံး နထေိုငျဖို့ မလှယျလောကျဘူး။ ကိုယျဘာပဲပွောပွော သူလိုခငျြတဲ့ အဓိပ်ဗါယျကို ကောကျယူသှားတတျတယျ။ပွီးရငျ မထငျမှတျတဲ့ အခြိနျအခါမှာ စိတျဆိုးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိမျထောငျကပြွီရငျတော့ သံသယကငျးပွီး စိတျခသြှားတဲ့ ယောကျြားတှလေညျး ရှိကွပွနျတယျ။
သူ့အမြိုးဆိုရငျ အကုနျကောငျးတယျ။နညျးနညျးမှ ထိလို့မရဘူး၊ သူမြားမိသားစု၊ သူမြားအမြိုးဆိုရငျ လူမထငျဘူး။ဘာမဆို သူတို့ဆိုရငျ အကောငျးခညျြးပဲ။ စဉျးစားကွညျ့လေ ဘယျလိုပေါငျးမလဲ။
စိတျမြားတဲ့ယောကျြား၊ ရညျးစားကို အထညျလဲသလို ထားတဲ့ယောကျြားမြိုးကို ရှောငျပါ။ဒီလိုယောကျြားမြိုးနဲ့ ညားသှားတာ ရညျးစားလုဘကျတှကေို အနိုငျရလိုကျပွီ မထငျလိုကျပါနဲ့၊ ကိုယျနဲ့ ညားပွီးရငျ နောငျအသဈပျေါလာတတျပါတယျ။
အစားအသောကျမကျတဲ့ ယောကျြားထကျ လောငျးကစားဝါသနာပါတဲ့ယောကျြားက ပိုကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ပိုငျဆိုငျသမြှ အကုနျပွောငျသှားတတျလို့ပါ။ လောငျးကစားဆိုရာမှာ ( ၂ ) လုံးထီ၊ ( ၃ )လုံးထီလညျးပါဝငျပါတယျ။
လကျပါတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးကို ရှောငျကဉျြပါ။ တဈခါခှငျ့လှတျလိုကျရငျ နောကျတဈခါ ပွနျလာတတျပါတယျ။
အတ်တဆနျလှနျးရငျ ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။ ဘာမဆို သူမှနျတယျ။ ဘာမဆို သူ့ကို အလိုလိုကျမှဆိုရငျ တဈသကျလုံး ဘယျလို အဆငျပွနေိုငျမလဲ။
ဒီလိုယောကျြားမြိုးဟာ အရညျအခငျြးရှိတတျပါတယျ။ယုံကွညျမူ အပွညျ့ရှိနတေတျပါတယျ။ ပွသနာက တဈခကျြလှတျအမိနျ့ပွောသလို စကားပွောတတျပါတယျ။သူဟာ သငျ့ကိုစိတျတှငျးကနေ အထငျသေးနတေတျပါတယျ။မိနျးကလေးမြားအားလုံးကို အထငျသေးနတောလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။သူ့ရဲ့ အမွငျမှာ ဒီကမ်ဘာကွီးကို ယော့ကျြားမြားက ပိုငျဆိုငျပါတယျ။ မိနျးမဆိုတာ အဖွညျ့ခံ လို့ သဘောထားပါတယျ။
Previous Article သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေကစားရင်း နားထဲကိုငါးအရှင်ကြီးဝင်သွားတဲ့ ကလေးလေး
Next Article “ မန္တလေးက တာဝန်ရှိသူများ ထိရောက်စွာအရေးယူပေးပါ ! ဒီလိုမျိုးတွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ? ”